Ungayihlaziya njani i-Linux Mint 18 Sylvia ukuya kwiLinux Mint 19 Tara? | Ubunlog
Ungayihlaziya njani i-Linux Mint 18 Sylvia ukuya kwiLinux Mint 19 Tara?
Ubumnyama | | Ulwabiwo olusekwe kubuntu
Zimbalwa iintsuku ezidlulileyo ukukhutshwa okukhethekileyo kwenguqulelo entsha yeLinux Mint 19 kwabelwana ngayo Tara ezisa nayo Iimpawu ezintsha kunye nokulungiswa kwe-bug ezimbalwa kuhlobo ngalunye lwazo ezahlukeneyo zokuhanjiswa okususelwe ku-Ubuntu.
Kubasebenzisi abaninzi oku kuhanjiswa kuqhelekile khuphela ingxelo entsha kwaye wenze ufakelo olutsha olucocekileyokodwa ayisiyiyo kuphela indlela yokufumana le nguqulo intsha.
Yiyo loo nto namhlanje Siza kwabelana nawe ngendlela elula yokuphucula ukusuka kwiLinux Mint 18 Sylvia ukuya kwiLinux Mint 19 Tara, Esi sikhokelo sijolise ngokukodwa kwi-newbies.
Kubalulekile ukukhankanya ukuba olu hlaziyo lusebenza kuphela kubasebenzisi beLinux Mint ngeCinnamon, XFCE okanye iMate kuba kolu hlobo lutsha lweLinux Mint 19 inkxaso yemeko-bume ye-KDE yasuswa.
Ke ukuba ungumsebenzisi wale flavour yosasazo, awuyi kuba nakho ukwenza uhlobo logxuma kule ndlela. Inye kuphela into onokuyenza kukufaka ukucoceka okucocekileyo kunye nokufaka imeko-bume yedesktop ye KDE.
1 Hlaziya iLinux Mint kuhlobo lwayo oluzinzileyo
2 Inkqubo yokuphucula ukuya kwiLinux Mint 19
Hlaziya iLinux Mint kuhlobo lwayo oluzinzileyo
Uhlaziyo oluvela kwiLinux Mint 18 Sylvia ukuya kwiLinux Mint 19 Tara isanda kukhutshwa Ngamazwi enkokeli yeprojekthi, akacebisi wonke umntu ukuba enze olu hlobo lutsibe.
Oku kufanelekile kwindawo yokuqala yokuba abo basebenzisa iLinux Mint 17 baxhaswa kude kube ngunyaka olandelayongokunjalo Abasebenzisi beLinux Mint 18 abanenkxaso ethe ngqo kude kube ngu-2021.
Esinye isizathu sengcebiso kukuba oku kukhutshwa kohlaziyo kuyacetyiswa kubo bonke abo basebenzisi abafuna ukwazi amanqaku amatsha.
Ungafuna ukuphucula kwiLinux Mint 19 kuba ezinye i-bug zilungisiwe okanye ufuna ukufumana ezinye zeempawu ezintsha.
Kuzo zombini iimeko, kuya kufuneka uyazi ukuba kutheni uhlaziya. Sonwabe kakhulu ngeLinux Mint 19, ukuvuselela ngokungaboni ngokusebenzisa ingxelo yamva nje akunangqondo, utshilo uClement Lefebvre.
Inguqulelo entsha yosasazo Isekwe kuhlobo lwamva nje lwe-Ubuntu LTS eyi-18.04Iya kuba neminyaka emi-5 yenkxaso, eya kuthi kude kube ngunyaka wama-2023.
Ngokwenza le nkqubo siza kufumana amanqaku amatsha abandakanyiweyo kule nguqulo intsha yeLinux Mint, phakathi kwazo esinokuthi siqaqambise isicelo "esitsha" ngokupheleleyo sokwenza iikopi zokulondolozwa kwenkqubo ebizwa ngokuba yiTimeshift.
Inkqubo yokuphucula ukuya kwiLinux Mint 19
Ukuqala le nkqubo yohlaziyo Kuyacetyiswa ukuba wenze ukhuphelo lwamaxwebhu akho abalulekileyo, kuba ukuba unengxaki nenkqubo yokuhlaziya, ungaxhomekeka kukhuseleko lwamaxwebhu akho.
Ngoku Kuya kufuneka sivule i-terminal nge-Ctrl + Alt + T kwaye siya kuqhubeka nokuhlaziya iipakeji eziyimfuneko kunye nokuxhomekeka:
Ngoku Siza kuqhubeka nokutshintsha eminye imigca kwifayile yethu /etc/apt/sources.list, kufuneka sifeze lo myalelo ulandelayo:
Ngaphambi koku ndingenza ingcebiso yokususa nayiphi na indawo oyigcinileyo, oku kwenzelwa ukuthintela iingxaki ezinokubakho ngokuxhomekeka kwaye ndenze uhlaziyo ngendlela ecocekileyo.
Ungasebenzisa isicelo ukwenza ukhuphelo kugcino lwakho kwaye emva kohlaziyo uzikhangele kuhlobo olutsha lwe-Ubuntu.
Senza iphakheji kunye nohlaziyo lokuxhomekeka kwakhona nge:
Uyenzile ngoku Siza kuqhubeka nokuhlaziya inkqubo yethu nge:
Le nkqubo ingathatha ixesha elithile ukuze usebenzise elo xesha komnye umsebenzi uqiniseke nje ukuba ikhompyuter yakho ihlala ixhunyiwe kwinethiwekhi kwaye ayixhonywa okanye ivale ngexesha lale nkqubo.
Ekupheleni kokukhuphela kunye nokufakwa kohlaziyo oluyimfuneko siqhubeka nokuqalisa kwakhona ikhompyuter yethu nge:
Xa uqala inkqubo kwakhona, oku kungathatha imizuzu embalwa, sinokujonga uhlaziyo ngalo myalelo ulandelayo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Ungayihlaziya njani i-Linux Mint 18 Sylvia ukuya kwiLinux Mint 19 Tara?
UJonathan Green sitsho
Enkosi, hlaziya kutsha nje, kwaye ngaphandle kweengxaki.
Phendula kuJonathan Green
Molo, andinakungena, ndifumana impazamo yemizuzwana eli-10, ndingayilungisa njani?
UAlex Ximenez sitsho
Ndingathanda ukwazi ukuba kunokwenzeka ukufaka i-linux mint 19 iqabane le-desktop kwimodeli ye-canaima netbook: i-EF10MI2 ine-1.8 GB ye-DDR3 ram, i-Intel celeron CPU N2805 64-bit processor kwi-1.46 Ghz / 1MB, imizobo ye-Intel Bay Trail, 10,5 Isikrini se-intshi ye-LCD, isisombululo se-1366 × 768, ibhodi yomama: I-PC enegunya lokufunda kwi-PC, inguqulo ye-BIOS MPBYT10A.17A.0030.2014.0906.1259 ye-09/06/2014. Ngokomyalelo we-lspci le yi-hardware efakwe kwi-pc yam: 00: 00.0 Ibhulorho yokubamba: I-Intel Corporation ValleyView SSA-CUnit (rev 0a)
00: 02.0 VGA isilawuli esihambelanayo: Intel Corporation ValleyView Gen7 (rev 0a)
I-00: 13.0 isilawuli se-SATA: Intel Corporation ValleyView 6-Port SATA AHCI Controller (rev 0a)
00: 14.0 Isilawuli se-USB: Intel Corporation ValleyView USB xHCI Host Controller (rev 0a)
00: 1a.0 Isilawuli sokubethela: Intel Corporation ValleyView SEC (rev 0a)
00: 1b.0 Isixhobo seAudio: Intel Corporation ValleyView Inkcazo ephezulu yoMlawuli weAudio (rev 0a)
00: 1c.0 ibhulorho yePCI: Intel Corporation ValleyView PCI Express Root Port (rev 0a)
00: 1c.1 ibhulorho yePCI: Intel Corporation ValleyView PCI Express Root Port (rev 0a)
I-00: 1f.0 ibhulorho ye-ISA: Icandelo le-Intel Corporation ValleyView yoLawulo lwaMandla (rev 0a)
I-00: 1f.3 I-SMBus: Intel Corporation ValleyView Umlawuli we-SMBus (rev 0a)
Isilawuli senethiwekhi: Realtek Semiconductor Co, Ltd. Isixhobo b01
Isilawuli se-Ethernet: Realtek Semiconductor Co, Ltd. RTL02 / 00.0B PCI Express Gigabit Ethernet isilawuli (rev 8111)
… Okanye kufuneka ndikhethe i-linux mint xfce desktop Ucinga ntoni?
Phendula kuAlex Ximénez
Ndizama ukwenza okufanayo, kodwa ukufaka iMint20.
Ndiyazibuza ukuba uza nesisombululo na, Alex.
Xa ndifaka, i-linux mint 19, ngelixesha lokuqalisa i-pc ikumisiwe, kwaye kuya kufuneka ndiyisebenzise ukuze ndiqhubeke nokuqala
UMarta Alvarez obambe umfanekiso sitsho
Ndiyifakile i-linux mint 17.3 Rosa kwaye ihamba kakuhle .. kodwa ndiyabona ukuba isebenza kude kube li-2019 kwaye ndingathanda ukubuza umbuzo, ngaba ukhona umngcipheko wokuhlaziya ukuya kwi-18… .. ngesiphelo? Okanye enye, ukuba ndilinde isaziso sohlaziyo ukuba sivele kumphathi wohlaziyo? Ngexesha elithile elidlulileyo ndihlaziye i-linux mint ngokusebenzisa umphathi wohlaziyo kwaye khange ihambe kakuhle, andazi ukuba kungenxa yendlela i-linux esebenza ngayo, kodwa ayigqibanga ukusebenza kwaye kuye kwafuneka ndiyifake icocekile. Enkosi.
Phendula uMarta Alvarez
Kolu hlobo lwenguqulo yokutsiba, eyona nto icetyiswayo kwaye isempilweni kukuhlaziya okucocekileyo.
Ndizamile ukuhlaziya iLinux Mint ukusuka kwi-18.3 ukuya kwi-19, kwaye emva kokuqalisa kwakhona ukugqiba ukufakela, ndifumana le mpazamo ilandelayo:
«Initctl: Ayikwazi ukuqhagamshela kwi-Upstar: Ayiphumelelanga ukuqhagamshela kwisokethi / com / ubuntu / phezulu: Unxibelelwano lwaliwe
syndaemon: inkqubo ayifumaneki
mdm : I-Glib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file! = NULL' ayiphumelelanga »
U-Ivan Nombela Lopez sitsho
Mholo. Ngaphandle kwezilumkiso, ndiphucule iMint 18.3 KDE (ukuqala kufakelo olucocekileyo) ukuya kwi-Mint 19 kwaye kubonakala ngathi isebenza ngokuchanekileyo. Ndingazi njani ukuba ngaba luhlaziyo olupheleleyo okanye luyinto ebonakalayo? Yeyiphi imisebenzi endiyiphosileyo okanye zeziphi iipakeji ezingakhange zihlaziywe okanye ezinokubangela iingxaki?
Phendula uIván Nombela López
Kukhulu, inqaku lakho lindincede kakhulu, sele ndihlaziyiwe ngale ndlela ichazwe apha.
Uyifaka njani indawo ye KDE desktop kwi-Ubuntu 18.04 LTS?
Inguqulelo entsha yeKhowudi yeVenkile yeVidiyo 1.25 ngoku iyafumaneka